နွေးထွေးလုံခြုံတဲ့ အမေ့အိမ်ကနေ ခွဲခွာလာရတာ ရက်ပေါင်း (၅၀) ပြည့်ပြီဖြစ်ကြောင်း ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ စည်သူဝင်း – Shwe Nay Chi
နွေးထွေးလုံခြုံတဲ့ အမေ့အိမ်ကနေ ခွဲခွာလာရတာ ရက်ပေါင်း (၅၀) ပြည့်ပြီဖြစ်ကြောင်း ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ စည်သူဝင်း
by Shwe Nay Chi
ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများတွင် ပါဝင်ရိုက်ကူးရာမှတစ်ဆင့် ပရိသ တ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရရှိခဲ့သူကတော့သရုပ်ဆောင် စည်သူဝင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြည်သူများနှင့်အတူ ပူး ပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လမ်းပေါ်ထွက်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရုံသာမက ညဘက်များတွင် မပျက်မကွက် သံဗုံးတီးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် အခုလို တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ စည်သူဝင်းကိုတော့ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရာ နေရာသို့ ခေတ္တခဏ တိမ်းရှောင်နေရတာ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း စည်သူဝင်းအတွက် စိတ်ပူနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့ အခြားသောအနုပညာရှင်များလည်း သူတို့ချစ်ခင်ရတဲ့ မိသားစုဝင်များနဲ့ ခွဲပြီး အဝေးတစ်နေရာတွင် နေကြရတဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းနေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း စည်သူဝင်းရဲ့ Faceb ook Story တွင် နွေးထွေးလုံခြုံတဲ့ အမေ့အိမ်ကနေခွဲခွာလာရတာ ရက်ပေါင်း(၅၀) ပြည့်ပြီဖြစ်ကြောင်း ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်များကလည်း သူတို့အားပေးကြရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ အခုလိုအဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အတွက် စိတ်မကောင် းဖြစ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရေးတော်ပုံကြီး အမြန်ဆုံးအောင်မြင်ပြီး ခွဲခွာနေကြရသူများအားလုံး မိသားစုဝင်များနဲ့ပြန်လည်ဆုံဆည်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက် ရပါတ ယ်။
ကျေးဇူးရှင်ပန်းတနော် ဆရာတော်ကြီးကိုရည်စူးပြီး ဝတ္ထုငွေနဲ့အတူ ဆရာတော်ဘုရားအတွက် တေးထပ်ဖြင့် အသံပူဇော် လှုဒါန်းခဲ့တဲ့ မေခလာ
ကချင်ပြည်နယ် စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဆီ စားသောက်ကုန်နဲ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ထူးအယ်လင်း
မြန်မာပြည်က သတင်းတွေကို အမြဲတမ်းနားစွင့်နေပြီး...
“ကြက်ဥ‌ကြော် စားပါအုံးကိုကို!” ဆိုပြီး...
Copyright © 2022. Created by Shwe Nay Chi.